Wa,ahyo Dariskaagu u Fiirso Dhaqanka Somalida – Rasaasa News
Waxaa Magaalooyinka mataanaha ah (Twin Cities) ee Minneapolis iyo Saint Paul ee gobolka mareykanka lagu qabtey course loogu talagaley dadka Mareykanka ah ee xiiseynaya iney bartaan dhaqanka, diinta, caadada iyo taariikhda dadka soomaliyeed. Sababta keentey in Classkan la soo abaabulo ayaa waxey ka denbeysey ka dib markii ay dhalinyaro soomali ah lagu eedeeyey iney soomaliya dagaal u tageen arinkaas oo soomalida ku nool qurbaha lagu dhibey iyadoo dadka mareykanka ah ee soomlida wada degan yihiin ay arinkaas ku beertey cabsi laga qabo soomalida iyo dhalinta da’da yare e soomaliyeed ee u nool guud ahaan qurbaha gaar ahaan Minnesota.
Waxaa kale oo aqoon kororsigan looga danlahaa wacyi galin iyo aqoon kororsi loo sameeyo dadka mareykanka ah si ayna u aaminin wax walba oo ay ka maqlaan idaacadaha iyo TVyada. Waxaa lawada ogsoon yahay in idaacadaha iyo warbaahinta guud ahaan ee reer galbeedku ay bixiyaan sawiro khaldan oo ka turjumaya dadka soomalida ah iyo islaamka guud ahaan. Waxaa ku badan gobolka Minnesota dadka soomaalida ah iyadoo soomalida ugu badan eek u nool North America ay degan yihiin Minnesota.
Haddaba, Asad Khalif Aliweyd [Asad Shane} oo ah Executive director of New American Academy, ahna Macalin dhiga maadada xisaabta ee dugsiyada sarre iyo Khadra Abdisafad Hirsi oo ka socotey Degmada Eden Prairie, MN ayaa si wada jir Courska u soo diyaariyey. Waxyaabaha dadkii meesha isugu yimid la barayey waxaa ka mid ahaa;
• Taariikha soomalida iyo marxaladihii ay soo mareen soomaalidu
• Soo galitaankii Islaamka ee Geeska Africa
• Imaanshihii reer yurub ee soomaliya
• Halgamadii Soomalidu usoo mareen xornimadooda
• Kala qeybintii soomaliya
• Xornimadii labada gobo lee waqooyi iyo koonfur
• Dawladii soomaliya iyo burburkii qarankii soomaliyeed
• Soomalida diinta ay aaminsan yihiin oo ah suni islaam
• Qaabka guurka iyo dhismaha qoyska
• Sababaha soomalidu u timid Minnesota
• Caqabadihii ay kala kulmeen mareykanka
• Iyo horumarka ay sameeyeen
Ka soo qeybgalayashu waxey ka koobnaayeen Hay’adaha dawliga, Schoolada, ganacsatada, madaxda dagmooyinka iyo qaar ka socdey kaniisadaha oo daneynayey bal iney fahmaan soomalidu waxa ay tahay.